Tranga finday 5 mailaka mila raisinao ho amin'ny fiheverana | Martech Zone
Tranga finday 5 mailaka mila dinihinao
Alakamisy, Desambra 11, 2014 Alarobia, Desambra 10, 2014 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo zavatra ataontsika matetika dia ny mijery ny fampitahana ny fifamoivoizantsika sy ny tahan'ny misokatra amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny volana lasa teo na tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Zava-dehibe ny fizahana ny refy anao ary ny fahaizanao manatanteraka tsara - fa tokony hanitsy ny fiovan'ny mpanjifa ihany koa ianao. Ny finday dia iray amin'ireo faritra tokony hijerenao satria samy hafa be ny isa rehefa mandeha ny fotoana.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay dia nitombo ny finday mba hifehezana ampahany lehibe amin'ny tontolon'ny mailaka. Ny fisokafany, kaonty manodidina ny 50% amin'ny totalin'ny fisokafana mandritra ny taona, no mahatonga ny fanatsarana ho an'ny finday ilaina ho an'ny emarketer rehetra. Na izany aza, na dia nampitombo ny lanjany aza ny finday, ny birao sy ny mailaka webmail dia mbola mitoetra ho ampahany betsaka amin'ny marketing amin'ny mailaka. Mba hanampiana anao hanatsara ny programa mailaka hifandraisanao amin'ny mpanjifanao, ny infografika vaovao dia manasongadina fironana finday dimy lehibe tokony ho fantatrao.
Amin'ity sary ity, Trends finday 5 avy amin'ny ReturnPath, hahita fiovana mahaliana ianao amin'ny fitondran-tena:
Maherin'ny 50% ny mailaka rehetra izao no misokatra amin'ny fitaovana finday. Namboarina tsara ve ny mailakao hijerena finday?
Ny tahan'ny fisokafan'ny mailaka dia miroso amin'ny fironana ambany satria manakaiky ny andro Krismasy isika. Efa nandefa ve ianao?
Ny fampiasana tablette raha oharina amin'ny fampiasana finday dia tsy niova firy tamin'ny taona lasa.
Ny fizarana ny mpihaino anao isaky ny firenena dia mety hiteraka fitondran-tena mailaka samy hafa be eo amin'ny sehatra sy ny fitaovana.
Raha ao amin'ny indostria manokana ianao dia hahita valiny hafa be noho ny refin'ny mailaka.
Tags: taham-panokafana mailaka amin'ny biraomailaka biraomailaka findaymailaka misokatra amin'ny findayfironana mailaka findaymailaka findayfinday-barotratahan'ny fanokafana findayfironana findaylalana miverinamailaka takelakatahan'ny fisokafan'ny mailaka takelakamailaka takelaka
Ireo orinasan-kevitra # 1 antony tsy nahomby tamin'ny fanatsarana ny motera fikarohana
Manova haingana ny zava-drehetra ny vanim-potoana niomerika